Ọrụ ndị godparents - Ndị nne na nna na Chineke ghọrọ chi
Ndị nne na nna na-aghọ baptism | Ụmụaka mmụta
E nwere omenala dị iche iche maka ndị nne na nna
Ọ ga-adị mkpa ka gị na nna nna gị chọrọ
Mgbe nwatakịrị chọrọ ime baptism, ọ dị mkpa ịchọta nna nna. Nke a ga-abụkarị onye kacha nso nne na nna. Ma olile anya ma obu oru, oru na ihe ndi ozo ka ejikorita ndi chi ha?
Anyị ga-aghọ ndị godparents!
Anyị na-aghọ chi!
Otu nna nna na-eso nwata ahụ mee baptizim site n'echiche okpukpe, na-ewere ọrụ na nwa ahụ na-amụta okwukwe n'onwe ya ma mụta ịdị ndụ.
Ruo n'afọ 1983, nkwado na chọọchị ahụ nọchiri anya mmekọrịta ime mmụọ. Okwu nna-nna bụ nna na-abịa site na Latin ma jiri ihe dị ka "nna".
Na Chọọchị Katọlik na Protestant, ọnọdụ maka nkwado dị iche.
Nke a nwere ike ịbụ mmekọ ọnụ nke mma, ihe e mere maka kandụl baptism, akwụkwọ ụmụaka dịka onyinye ma ọ bụ ọchịchọ onwe onye maọbụ nkwa maka ndụ, nke e dere ede. N'ebe ụfọdụ, ọ bụ omenala ụmụaka ka ha wetara nna ha nna n'ọbụ aka nkwụ nke a na-eji mma chọọ ma gọzie na chọọchị ahụ. Ụbọchị nke baptism nwere ike ịbụ ihe kpatara nzukọ kwa afọ iji cheta baptism na nkwa ahụ.
Taa, Otú ọ dị, taa, nkwado okpukpe nke ndị godparents kwadoro n'ụzọ dị iche
A choro onye nkwado iji soro nwatakịrị na-etolite onwe ya ma nyere nne na nna aka n'ihe gbasara agụmakwụkwọ. Mgbe ụfọdụ, ịkwado nkwado na-ejedebe n'inye onyinye n'oge ememe.
Ndị nne na nna ochie kwesịrị ịgbalịsi ike ka ha na chi na-enwe mmekọrịta onwe ha ma nọrọ n'ebe ahụ dịka onye ndụmọdụ ha ma ọ bụ onye ogbugbo n'etiti nne na nna. Na n'oge gara aga, ndị godparents nwere nlekọta anya na ọnwụ nne na nna ha. Otú ọ dị, nkwado anaghị ejikọta na nlekọta. Ọ bụrụ na ndị nne na nna chọrọ, a ga-ekpebi nke a na uche.
Gịnị bụ atụmanya, ọchịchọ na ibu ọrụ nye ndị nna ochie? Nke a na-azọpụta ndakpọ olileanya na n'akụkụ abụọ. N'okwu kachasị mma, mmekọrịta nke ntụkwasị obi na-etolite n'etiti nwatakịrị na Patenke ga-adịgide ruo ọtụtụ afọ. O doro anya na ndị nne na nna apụghị ịghọ ndị nna ha, mana nne na nna ochie. A na-ahọrọ ụmụnne gị ma ọ bụ ezi ndị enyi. Ọ dị mkpa na ị nwere ike iwulite ibe gị maka ụkpụrụ na agụmakwụkwọ.
Okwu na baptism
Buru nna - ime ime mmadu
Kedu ihe mere anyị ji eji anyaụfụ na - ajụ nwa
Gbanyụọ nsogbu azụ
Bụrụ onye na-emegharị ihe - eBook maka Free
Asụsụ mba ọzọ maka nkwurịta okwu
Onyinye na-amụ nwa
Ike gwụrụ M ga - ezumike - ederede na ederede
Ego ego n'akpa uwe | Mmụta ụmụaka
Àgwà Ahụhụ nke Ụmụaka | Ụmụaka mmụta
G in i mere m kwesiri iji mụọ umuaka? mmụta
Kwado na uwe ụmụaka | mmụta
Gaa ụmụaka, ụlọ dị ọcha! | mmụta